ဒီကနေ့ Lifestyle Myanmarပရိတ်သတ်ကြီးကို ပြောပြချင်တာက”မသိတာပဲကောင်းတယ်”ဆိုတာပါ။ (Ignorance is bliss).လူတွေကတော့ မသိတာက လျစ်လျူရှုတာက သုခ အာ့လိုပြောကြတယ်။ တကယ်တေော့ဟုတ်ပါ့မလား??? အဲစကားမစပ်.. ဟုတ်. တယောက်တည်းဆိုတော့…တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ပေါက် ကလောကကြီးကိုအကျယ်ကြီးမြင်နေရတယ်။ ပန်းလေးတွေပွင့်နေတာလည်းမြင်ရတယ်…ဖျာလေးတစ်ချပ်က သူ့အတွက် အရမ်းကျယ်နေတယ်။ နာရီတွေက ကြာနေတယ်။ ၂၄နာရီက သူ့အတွက် ပိုနေတယ်ထင်ရတယ်။ အိမ်မြှောင် စုပ်ထိုးသံလေးတောင် အရမ်းကျယ်တယ်။ သူက ပွင့်တော့မယ့် နှင်းဆီပန်းလေးကို တညလုံး ရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်နေသလိုမျိုး…သူက တယောက်တည်းလေ။ အဲ့လိုခံစားဖူးရင်.…မသိတာပဲကောင်းတယ်..ကဲဖတ်ကြည့်တော့…
တနေ့…ဘယ်နေ့လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိဘူး.…တချို့အရာတွေက မသိတာပဲကောင်းတယ် .ကျွန်တော် ဂျပန် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးတယ်။ ခွေးလေးပေါ့လေ..ခွေးလေးနာမည်က မြန်မာမူ ပြုရရင် ငမောင်တဲ့။ သူကလမ်းဘေးလေးမှာ နို့မစို့တတ်တဲ့အရွယ်တည်းက ပစ်ထားခံရတာ။တနေ့…အမူးသမား သူ့ဘဝကိုကျေနပ်ပီး အောင်မြင်နေတဲ့လူက သူ့ကိုမွေးစားသွားတယ်။ ဒီခွေးလေးက သူ့ဘဝထဲရောက်လာတယ်။ သူတို့အရမ်းတွယိတာသွားကြတယ်…
ခွေးလေးက သူ့ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လာလုပ်ရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ အရာရောက်နေသလို သူခံစားရတယ်။ ဒီထက်အရေးကြီးတာတွေရှိသေးလို့ အနှစ်ချုပ်မယ်။
နောက်ဆုံး သူ့သခင် ဘူတာရုံကို ခွေးလေးက လိုက်ပို့နေကျ။ သူ့ဘာ ပြန်တယ်။နေ့တိုင်းပေါ့။ တနေ့ သူ့သခင်ကိုလိုက်ပို့ပြီး သူ့သခင်က သေသွားတယ်။ ဒါကိုမသိပဲ ခွေးလေးက အနှစ် ၂၀လုံးလုံးစောင့်နေခဲ့တယ်ဘူတာရုံလေးမှာ သူမသိဖူးလေ…မသိတာပဲကောင်းတယ်.
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ဖူးတယ်. The Last Leafဆိုတာလေ..ဘားမန်းဆိုတဲ့ပန်းချီဆရာကြီး ဘယ်သူ့မှ သူ့ကိုလက်မခံတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီး
သိတယ်ဟုတ်..သူက အပေါ်ထပ်က ကလေးမလေး၂ယောက်မှာ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ Psychoကိုကူညီပေးတာ..ပြောချင်တာဗျာ ကောင်မလေးက ပြတင်းပေါက်ကသစ်ရွက်တွေကိုကြည့် သစ်ရွက်လေးတွေကြွေ..နောက်ဆုံး သစ်ရွက်လေးတစ်ရွက်ကြွေရင် သူသေတော့မှာလိုတွေးနေတာ ယုံကြည်နေတာ..သူ့ပြတင်းပေါက် လှမ်းကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ နွယ်ပင်လေးတွေတွယ်တက်နေတဲ့ နံရံဟေောင်းလေးက သစ်ရွက်လေးကိုညတိုင်းကြည့်တယ်။ လေပြင်းတွေကြွေ မိုးတွေတိုက် ဖြစ်နေရင်လည်း သူကြည့်တယ်။
သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲ့ဒီသစ်ရွက်လေး တိုက်မှာကပ်နေတဲ့သစ်ရွက်လေး ကြွေသွားရင် သူသေတော့မှာ..သူ့ PSYCHO စိတ္တဇပါ့.လေ..တစ်ရွက်လေးပဲကျန်တော့တာ…သူကကြည့်ချင်တာ.တံခါးလေးကိုဖွင့် ကြည့်…မကြွေ တည ၂ ည ၃ ည လုံးဝမကြွေ…ပန်းချီဆရာကြီး ဗားမန်းကတော့မိုးရေထဲမှာ သစ်ရွက်လေးဆွဲခဲ့တယ်..မီးအိမ်လေးနဲ့ ..မိုးတွေ တိုက် လေတွေရွာနေတဲ့အချိန်မှာ..နောက်ဆုံး သူအဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့သေသွားတယ်.အဲ့ဒါကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချင်နေတဲ့ကောင်မလေး မသိဘူး။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက တကယ်သေချင်တာလားဆိုတာလည်း ဗားမန်းမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗားမန်းရဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ နောက်ဆုံးလက်ရာပေါ့။ ဒီလိုလေးပီးသွားတယ်။ ကျွန်တော်ကဆက်တွေးတယ်..တချို့အရာတွေက မသိတာကောင်းတယ်ဆိုတာလေ….ကျွန်တော် ပထမဆုံးရည်းစားအကောင့်လေးကို သူမသိအောင် ခိုးပီးကြည့်ဖူးတယ်..ဘုရားသခင် အံသြသွားတာ..ပီးတော့ငိုရတယ်…တကယ်က.. တချို့ကိစ္စတွေက မသိတာပဲကောင်းပါတယ်..ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ မသိတာပဲကောင်းပါတယ်။